ओमानबाट विप्लवलाई खुला पत्र | Ratopati
personताराप्रसाद पौडेल exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ५, २०७६ chat_bubble_outline3
आदरणीय विप्लव दाइ नमस्कार !
विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदै तपाईंलाई यो पत्र लेख्दै छु । जीवन निर्वाहका लागि प्रचण्ड गर्मीमा धेरै नेपालीले पसिना बगाउँदै आएका छन्, तीमध्ये म पनि एक हुँ । आज मजस्ता लाखौँ युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदै देशका हरेक घटनालाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् । साधन स्रोत नै भभएका देशहरु विकसित हुन पुगे तर स्वर्गको टुक्राजस्तो देशका नागरिक दैनिक गुजारा र रोजीरोटीका यी देशहरुमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छौँ ।
देश विकासमा केही आशा देखिन थालेको थियो तर अर्काे कालो बादल मडारिन थालेकोे छ । के नेपाललाई शान्त र समुन्नत बनाउन सक्दैनौँ ?
लोकतन्त्र र समृद्धि प्राप्त गर्ने सपना देखेका जनताले हरेक लडाइँमा राजनीतिक दललाई साथ दिइरहेका छन् । यसरी बलिदानी दिएको आज सत्तरी वर्ष बितिसक्यो । यो बीचमा विश्व मानचित्रमा नभएका कैयौँ देश जन्मिएर विकसित देशको सूचीमा दरिइसके । तर सदियौँदेखिको हाम्रो देश ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर पनि गरिबी उस्तै छ ।
यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने नियत सही भएन भने जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि केही नहुँदो रहेछ । नेपालमा सही नियत भएका नेतृत्व देशले पाएको भए हामी पनि आज विकसित देशका नागरिक भएका हुन्थ्यौँ ।
यी सबै कुरा तपाईंलाई राम्ररी थाह छ । देशले धेरै दुर्गति भोगिसक्यो । जनताले धेरै पीडा भोगिसके । कैयौँ बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाए । देश गरिबीमा पिल्सिएपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार आम सर्वसाधारण जनतामा परेको छ । हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन देख्यौँ, सशस्त्र द्वन्द्व देख्यौँ, आपत विपत देख्यौँ, अनि गरिबी अभाव र पछौटेपन देख्यौँ तर समृद्ध नेपाल देख्ने सपना सबैको अधुरो रह्यो । के समृद्ध देश हामीले देख्न नपाउने ? नेताहरुको अदुरदर्शिता र सनकीपनले देशले यो दुर्दशा भोगिरहेको छ । अहिले हामीले जुन संविधान पाएका छौँ, त्यो पाउनमा दशौं हजारले बलिदानी गरे । यसमा देशले ठूलो धनराशि गुमाएको छ । जुन संविधानलाई हामी मान्दैनौँ भनेर तपाईं देशमा सशस्त्र युद्धको आवश्यकता देखिरहनुभएको छ त्यसले देशलाई कदापि फाइदा गर्दैन । सोच्नुस अब फेरि युद्धको बाटोमा जानुभयो भने नेपाल अझै बीस वर्ष पछि पर्नेछ । त्यतिबेलासम्ममा तपाईंको जवानी सकिएको हुनेछ । अनि लाखौँ युवा तथा जनताको जीवनस्तर अरू खस्किएको हुनेछ । हो निश्चित तह र तप्काका केही ठेकेदारहरू अवश्य मोटाउने छन् । त्यसमा तपाईंकै पार्टीभित्रका पनि केही पर्नेछन् । तपाईंले सामन्तवादका नाममा थालेको यो युद्धले देशको राष्ट्रियतालाई अझ कमजोर हुनेछ ।
देशमा अहिले सबै कुरा ठिक छ, सरकारबाट कमजोरी भएका छैनन् भन्न खोजेको होइन । समृद्धि र देश विकासका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । भ्रष्ट लुटेराहरु खुलेआम घुमिरहेका छन् । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् । माफियाहरूको जालोमै देश फसिरहेको छ । तर अब देशले अशान्त वातावरण कति पनि थेग्न सक्दैन । तपाईंको नियत सही होला तर अब उठ्ने बम, बारुद र बन्दुकको नालले केवल अनि केवल देशमा क्षति मात्रै गराउने छ । कैयौँ नारी विधवा बन्नेछन् । धेरैलाई टुहुरा बनाउने छ । सोझासाझा जनतालाई कङ्गाल बनाउने छ । किनकि हतियार चलिसकेपछि त्यो नियन्त्रणबाहिर हुनेछ । तपाईंले चाहँदा चाहँदै पनि युद्ध सही उपयोग अवश्य हुनेछैन । त्यो युद्ध तपाईंको नियन्त्रणमा हुने छैन ।
प्रिय कमरेड ! तपाईंका धेरै भाषण र अन्तरवार्ता हेरेको छु । तपाईंको अनुहारमा प्रष्ट रूपमा इमानदारिता, पीडाबोध र राष्ट्रियताको भावना झल्किन्छ । तर अब अशान्त बाटो अपनाएर तपाईं यी समस्या समाधान किमार्थ हुँदैनन् । कुरीति, कुशासन, भ्रष्टाचार तथा माफियातन्त्रविरुद्ध लड्न अझै बाँकी छ । यिनका अवशेषलाई निमिट्यान्न पार्न बाँकी नै छ तर त्यसलाई शान्तिपूर्ण बाटोबाट सम्पन्न गर्नुपर्छ । ओली र प्रचण्डलाई देखाउँछु भन्दै सनकमा बम, बारुद र बन्दुक चलाउने निर्णय गर्नुभयो भने तपाईंको सपना पूरा हुन कठिन छ । देश र जनताले दुःख मात्र पाउने छन् । किनभने हाम्रो भूराजनीति नै यस्तै छ । दुई ठूला देशको खिचातानीमा नेपाल पिल्सिएको छ । जियोपोलिटिक्सलाई हामी चाहेर पनि नजर अन्दाज गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अँगाल्नुको विकल्प छैन । बितेका कैयौँ दशक राजनीतिक प्रतिशोधमा अशान्तमा बिते व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा बिते तर देशले केही पाएन, धेरै गुमायो । त्यसैले अब बाटो बदल्ने बेला आएको छ । अबका केही दशक देशलाई शान्त राखौँ, कुशासनविरुद्ध शान्तिपूर्ण खबरदारी गरौँ । भ्रष्टहरुलाई सामाजिक बहिष्कारको नीति लिऊँ तर बन्द हडताल अनि बम बारुदको राजनीति नगरौँ । अहिले सञ्चार क्षेत्र बलियो भएको छ । सञ्चारकर्मी इमानदार भए भने माफियाहरु लुक्न या घटना लुकाउन सक्दैनन् । त्यसैले शान्तिपूर्ण बाटोबाट देश निर्माणको अभियानमा लागौँ । जहाँ हुनुहुन्छ तुरुन्तै सार्वजनिक भएर यही संविधानलाई स्वीकार गरेर त्यसमा रहेका कमिकमजोरी संशोधन गरी शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुस । देशका कुना काप्चामा पुग्नुस्, जनताले तपाईंहरुलाई अवश्य विश्वास गर्नेछन् । लडेर हेर्याैँ, तोडेर फोडेर धेरै हेर्यौं, अब बाटो बदलेर जोडेर हेरौँ । तपाईं हामी सँगै जोडिएर हेरौँ । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौँ, राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ । दुई छाक खान अनि घरपरिवार पाल्न सात समुद्र पार गरेर गएका लाखौँ युवाहरु देश फर्किन आतुर छन् । देशलाई बदल्न लालयित छन् । बन्दले देश बन्दैन, अब नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम सबै बन्द गरौँ । म परदेशको भूमिबाट तपाईंलाई राजनीतिक बाटो परिवर्तन गर्न विनम्र अनुरोध गर्छु ।
हाल मस्कट ओमान
April 24, 2019, 2:25 p.m. Sunil
मैले नेपाल कस्तो किसिम का लोकतंत्र छ , अहिले सम्म बुझे को छैन . लोकतान्त्रिक विधि का पहिलो प्रथमिकता समावेशी(inclusive ) विधी का स्थापन गर्नु . जब सम्म देस मा समावेशी(inclusive ) विधी (चाहे त्यो राजनीति मा होस् ,चाहे त्यो नो करी को अवसर होस् ,सिक्षा का अवसर होस् ,सामजिक सम्मान मा होस्) को स्थापना हुन्न तब सम्म देश लोकतंत्रिक विधि स्थापित भयको हुदैन यो गण तन्त्र पछी देश मा inclusive(समावेशी) भन्दा पनि exclusive(अनन्य) बढी भयो ,उदारण को लागि प्रचण्ड को निजि योगदान होला ,त्यो आफ्नो ठाउ मा छ ,उनको शक्ति को भर मा छोरी मेयर हुने ,हारे को चुनाब पनि जबर जस्ती साम दाम दण्डवत सबै प्रयोग जिताउनि ,बुहारी लाइ मन्त्री बनाउने ,शक्ति को आढ़ मा भ्रष्टचार ब ढा उ ने ,यौटा सामान्य अस्थाई सी क्ष क जागिर खान पनि दक्षता भन्दा राजनीतिक पहुच हुनु पर्ने ,याउटा कर मा काम गर्नी खरदार लाखौ पैसा कुम्लायर दरबार बनाउ छ ,उसलाई कारवाही हुदैन ,किनकी चुनाब मा पार्टी लाइ पैसा दिन्छ . यस्तो बिथिति को व्यवस्था ले कसरी समावेशी समाज को निर्मण हुन्छ ,कसरी समानता हुन्छ , कसरी समाज मा सोषोक वर्ग को अन्त्य हुन्छ . अर्की कुरा प्रजातन्त्रिक पद्दति मा सबै कुरा को कन्ट्रोल ब्य्वास्थ्पिका संसद बाट हुन्छ ,संसदीय बिधी बाट बनेको दुइ तिहाई को सरकार ,प्रजातन्त्रिक पद्दति मा सब भन्दा बलियो सरकार छ ,तर यो सरकार का क्रियाकल्प् ले प्रजातन्त्रिक व्यवस्था नै देश को लागी उचित रहेन छ ,भन्ने जनता लाइ महसुस भयको छ ,अहिले नेपाल को परिस्थिती मा देश मा प्रजातन्त्रिक व्यवस्था छ या घोर पुजिवादी व्यवस्था( दलाल पुजीपति हरु ले राजनीतिक पार्टी लाइ आर्थिक सहयोग गर्नी ,अनि उनी हरु को सरकार बने पछी ,दलाल र पुजिवती हरु लाइ अनुकुल त था फाइदा हुने काम गर्नी ) छ यो नै दुविधा को प्रस्न छ . पियन देखी प्रधान मन्त्री सम्म सबै भ्रष्टाचार मा लुप्त छन् ,यिनी हरु को दोष पत्ता लगाऊ ने न्यापालिका ,यसमा पनि राजनीतिक(सरकार) को नकरात्मक प्रभाव छ ,यसलाई कारवाही गर्नी निकाय कार्यपालिका यसमा पनि राजनीतिक(सरकार) को नकरात्मक प्रभाव छ, अब यौटा चोर अर्को चोर लाइ के गर्नी ? हुदा हुदै सरकारी जग्गा पनि मन्त्री ले आफ्नो नाम गराउ छन ,यस्तो हुदा पनि सरकार चुप छ ,यो विकृति को जवाफदेही (Accountable) सरकार हो ,सरकार आफै मा किन कमजोर छ ,गलत लाइ गलत सही लाइ सही भन्न किन सक्दैन ,सरकार हो अस्थाई जागिर त होइन केहि बोले जागिर जान्छा कि भन्ने डर ? जुन जनता संघ सम्बन्धित कुरा मा सरकार ले कुनै लोकप्रिय कार्य गरेको छैन ,उल्टै ने क पा विप्लप लाइ प्रतिवन्ध लगायर देश मा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढाय को छ ? यो ने क पा को सरकार लाइ मात्र दोष होइन ,समग्र व्यवस्था नै गलत छ , घर गृहस्थी चलाउने कुनै विकल्प न भय र गरीबी बाटा मुक्ति पाउन का लगी राजनीती लाइ बिकल्प का रूप मा प्रयोग गरेका नेता हरु छन(अपबाद बाहेक ) ,जसको लक्ष्य आफु पछि का ३ पुस्ता गरीब न हुन भन्ने नियत ले पैसा कमाउने बाटो मा लागेका नेता हरु छन | यहाँ का पार्टी का नेता हरु यौटा ले अर्को को अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार छैनन,पार्टी भित्र गुट उप गुट छन ,यसरि कसरि लोकतंत्रिक व्यवस्था मजबूत हुन्छ ,नेता हरु मन्त्री ,प्रधान मन्त्री बन्नु पर्यो भने भारतीय राजदूताबास मा गयर गिड गिड उ छन , नेपाल प्रजा तन्त्रिक मुलुक हो ,यहा संसदीय व्यवस्था छ ,देश को प्रधान मन्त्री र मन्त्री चुन्ने काम त् संसद ले गर्नी हो किन राजदूत बास मा धाउने ,किन नेता हरु आफ्नो निर्णय गर्न सक्दैनन् ,कुनै पनि पार्टी मा नेतृत्व क्षमता ,व्यवस्थापन क्षमता भयको नेता छैन ,जसको कारण वर्तमान पद्दति जसलाई प्रजातन्त्र र संघियता नाम ले नामकरण गरियोको छ ,यो विधि असफल भै सकेको छ ,अब जनता ले यसको विकल्प खोजी रहेका छन यस्तो विधि र पद्दति को बिरुद्द जनाक्रोश ,जनक्रांति का सुरुवात भयो ,अब सायद ओली नै यो पद्दति का अन्तिम प्रधान मन्त्री हुन सक्छन
April 20, 2019, 12:38 p.m. hari
धेरै राम्रो सल्लाह दिनु भएको छ । बुझ्ने मानिश हो भने यो लेख पढेर अबस्य बुझ्ने छन ।
April 18, 2019, 7:23 p.m. Bhim shahi
सारै राम्रो लेख हो यदि नेपाल देश बिकास निर्माण गर्नु छ भने बिप्लप दाई भष्ट्चारि लाई अन्त्य गर देस बेच्ने दलालीलाई फासि देऊ बिस्तार बादि लाई गोलि ठोक आम नेपालि जन्ताले तपाई ला अवंस्य साथ दिनेछन ।
Lekh padhera Ek Damai Khusi Lagyo Patrama Ullekh Bhaye Anusar Bhayema Ramro Hune Thiyo
पराधीन राजनीतिको तानावान
टानलाई राजनीतिक अखडा बनाउने कि व्यावसायिक संस्थाका रूपमा पुनर्जागरण गर्ने ?
गुरुपूर्णिमा र आजको सोच